Manzi Camping itende, Sleeping Bag, Picnic Kwengubo, Ibhishi ithawula - Camping Green
esheshayo ithawula eyomile
zone amahhanisi & isixhumanisi pas entsha
Real House Itende
High izinga ultralight isikhwama ekulaleni mummy
Canvas isikhwama ekulaleni
Kungakhathaliseki itende amanzi akugcini nje ezihlobene amanzi ikholomu kangakanani lendwangu, abaluleke kakhulu kukhona umklamo kanye bewumsebenzi. Kuzwakala kulula, kodwa eziningi ematendeni emakethe akulona manzi, ngisho ke okukhulunywa amanzi ikholomu 5000mm. Siyabonga zasendlini imishini yokuhlola imvula, okuyinto enze kube nokwenzeka ukuba abe ukukhanya imvula ukuba ahlasele kunini, ke usisize ukuthola kungenzeka avuzayo ukuqinisekisa ukuba bakwazi ukukhiqiza ephelele etendeni amanzi.
Yini ukwakhiwa lokuthunga bag yakho ilele? Ingabe kahle zafanelwa inhloso yakho? Ingabe umphakeli wakho ethi kumelwe okuyinto ukwakhiwa isetshenziselwa esikhwameni sakho ingalali futhi isici ukwakhiwa ngamunye? Ngokuvamile, zikhona 2 ezakhiwe ehlukahlukene edayiswa emakethe, H chamber kanye double H chamber.The H Chamber kuyinto ukwakhiwa elula futhi ethandwa kakhulu, thunga igobolondo, ukwahlukanisa kanye abami ndawonye ngqo. Lokhu ukwakhiwa ngokuvamile esetshenziselwa ehlobo-entwasahlobo onobuhle.
Ingabe uyazi ukuthi zingaki zamatshe epikinikini yakho yokulala, lokho okungaphakathi? Yini isici ngasinye epikinikini ingubo ezahlukene? It evamile ukwenza ngale ndlela. Acrylic, uboya Polar & polyester ezinyatheliswayo izinto phezulu, PE & aluminium ucwecwe, PEVA, Oxford angangenwa manzi njengoba ngezansi. Sponge & polyester fibre njengoba impahla phakathi. Ezinye epikinikini ingubo has 2 izingqimba kuphela. Ungase uthole izinto ehlukahlukene edayiswa emakethe, ngathi, kungcono akunankinga. Thina likhiqize izinhlobo ezingaphezu kuka 1,000,000 ezahlukene epikinikini zokulala, ngingubani ithemba esinalo lento ekufanele. Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uhlole at FAQs noma uxhumane nathi.